Asia Green Development BankMPU-UnionPay Cards » Asia Green Development Bank
MPU UnionPay Co-Brand Debit Card
မြန်မာပြည်တွင်းသာမက ပြည်ပနိုင်ငံပေါင်း ၁၅၀ ကျော်တွင်လည်းအသုံးပြုနိုင်သော MPU UnionPay Co-Brand Debit Card အမျိုးအစားတခုဖြစ်ပါသည်။ ပြည်တွင်း၌ MPU ကဒ်အဖြစ်အသုံးပြုနိုင်ပြီး၊ ပြည်ပနိုင်ငံများ၌ UnionPay ကဒ်အဖြစ်အသုံးပြုနိုင်မည့် ကဒ်အမျိုးအစားဖြစ်ပါသည်။
ဘဏ်အတိုးနှုန်းတစ်နှစ်လျှင် 8.6% ခံစားခွင့်ရရှိမှာဖြစ်ပြီး၊ (၃) လ တစ်ကြိမ် တိုးရင်းပေါင်းထည့်ပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။
UnionPay - Green Card
UnionPay - Lunar New Year Card (Limited)
Card Mobile App (AGD Pay)
UnionPay – Green Card
AGD ဘဏ်ခွဲများ တွင်လျောက်ထားနိုင်ပါသည်..
ဤကဒ်ကိုအသုံးပြု၍ MPU (သို့) UnionPay Logo ပါရှိသော ATM စက်များတွင် ငွေသားထုတ်ယူနိုင်ခြင်း ၊ MPU (သို့) UnionPay ကဒ်လက်ခံသော POS စက်တပ်ဆင် ထားသော Merchant များတွင်ဈေးဝယ်ခြင်း၊ MPU (သို့) UnionPay ကဒ်ဖြင့်ပေးချေနိုင်သော Website များတွင် ဈေးဝယ်ခြင်းတို့ကိုလွယ်ကူစွာလုပ်ဆောင်နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
ပြည်တွင်း/ပြည်ပအသုံးပြုနိုင်သည့် ကဒ်ဖြစ်သည့်အပြင် ကဒ်၏ Mobile Application (Virtual Card) အနေဖြင့်ပါအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
နိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင် (သို့) နိုင်ငံကူးလက်မှတ်
ကဒ်ဖိုး 3,000 kyats Free Now!
ကဒ်ပျောက်ဆုံး/ပျက်စီးခြင်း 3000 MMK
POS စက်များတွင်ငွေပေးချေခြင်း Free
Online မှငွေပေးချေခြင်း Free
ATM မှငွေသားထုတ်ယူခြင်း ပြည်တွင်း ပြည်ပ
* Free (in AGD-ATMs)
* 0.2 % of withdraw amount
in (Non AGD ATMs) 3000 MMK (per transaction)
စာရင်းလက်ကျန်ငွေစစ်ဆေးခြင်း Free 1000 MMK (per transaction)
Free (in mobile application for both Local & Oversea)
AGD Bank မှကဒ်များကိုမိမိနှင့်နီးစပ်ရာ AGD Bank ဘဏ်ခွဲတိုင်းတွင် လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
အသေးစိတ်အချက်အလက်များသိရှိလိုပါက AGD Bank ၏ 24 နာရီ Call Center ဖုန်းနံပါတ် 01-239-9333 သို့ဆက်သွယ်မေးမြန်းစုံစမ်းနိုင်ပါသည်။
UnionPay Card အသုံးပြုသူများရရှိနိုင်သော နိုင်ငံတကာရှိ Discount များအကြောင်းသိလိုပါက ဤ link ကိုနှိပ်ပါ
UnionPay International အကြောင်းပိုမိုသိရှိလိုပါက ဤ link ကိုနှိပ်ပါ
Chinese New Year Limited Edition Card
Mobile Application (AGD Pay)
ကဒ်၏ Mobile Application မှတဆင့်
ငွေလွှဲခြင်း ၊ ငွေပေးချေခြင်း
QR Scan ဖြင့်အသုံးပြုနိုင်ခြင်း
Card Pin (Password) Change ခြင်း၊
Card Lock/Unlock ပြုလုပ်ခြင်း၊
Card စာရင်းလက်ကျန်ငွေ (အခမဲ့) စစ်ဆေးခြင်း၊
မိမိအသုံးပြုခဲ့သော ပြည်တွင်/ပြည်ပ transactions များကိုအလွယ်တကူပြန်ကြည့်ခြင်း နှင့်
live support မှတဆင့် အကူအညီများတောင်းခံခြင်းတို့ကိုမိမိကိုယ်တိုင်စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။
E-Commerce ဖြင့် ဈေးဝယ်ရာတွင်အသုံးပြုရမည့် Card No. နှင့် CVV2 No. တို့ကိုအလွယ်တကူကြည့်ရှုနိုင်သည့်အပြင် AGD Co-Brand Card အသုံးပြုခြင်းဖြင့်ရရှိနိုင်သော Promotion သတင်းများကိုလည်း Mobile Application မှတဆင့် သိရှိနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
ကဒ်၏ Mobile application ကိုအောက်ပါ link တွင်ရယူပါ …:
How To Use UnionPay Card in Godaddy Website – pdf
Go Daddy is the world’s largest domain name registrar and Web hosting provider.